Gobolada Sool iyo Sanaag oo si weyn looga qayb qaatey maalinta nadaafada: Sawiro/daawo) - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Gobolada Sool iyo Sanaag ayaa maantoo kale ku dhaqaaqa arin muhiima. Waxay 18 May u yaqaanaan maalinta qashin-qubka waxana aad loogu soo baxaa in maalintaas qashinka si fiican loo aruuriyo dhamaan deegaanaa SSC.
Magaalooyinka goboladaas ayaa waxa u dheer in la gubo calanka ururka SNM oo iyaguna maantoo kale Hargeysa uga dabaaldega maalin dadkii u soo taagnaa sida C/llaahi Jawaan ayna garanayn meel ay taariikhda kaga taalo.
Tani ayaa muujinaysa sida goboladaas uga go’an tahay in aan gosha la gashan oo weligood xor ahaayeen lana soo dagaalameen Ingiriiska ilaa markii dambe uu ku garaacay diyaarado.
Waxa ka dhisan qalcadihii gumeystuhu geli kari waayay sida Taleex oo u baahan in dib loo dhiso kana mid noqoto goobaha dalxiiska. Markii gumeystuhu baxay waxa dawladihii ka dambeeyay ee Somaliyeed dhiseen deegaanadii u daacada ah gumeystaha ayagoo dayacay deegaanadii diidanaa gumeystaha ee xataa diido inuu ku dhalo sida Awdal.
Sawirada sare waa Taleex
Hoos ka daawo Buuhoodle